सहभागी हुनुहोस् – वितरण
कृपया तपाईंको भाषालाई छनौट गर्नुहोस्
हाम्रा पाठकहरूका निम्ति
बाइबल अध्ययन गाइड
पाठकको गृह क्षेत्र
कसरी तपाईं हाम्रा वितरण क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भनी थाह गर्नुहोस्
तपाईं सहभागी हुन सक्ने तीन तरीकाहरू छन्ः पहिलो, तपाईंको प्रार्थनाद्वारा; दोस्रो, दानहरूमार्फत; तेस्रो, तपाईंको क्षेत्रमा निःशुल्क साहित्य वितरणमा सहभागी हुने कामद्वारा ।
सहभागी हुने तरीकाहरू
स्वेच्छिक सेवा गर्ने
प्रार्थना गर्नुभएर सहभागी हुनुहोस
धेरैले तिनीहरूका क्षेत्रमा र संसारभरि नै वितरणमा सहभागी हुने चाहना प्रकट गरेका छन् । हामी अझ बढी जानकारीको निम्ति यी अनुरोधहरूलाई सराहना गर्दछौं र तपाईंले हामीसित जोडिन सक्ने तरीकाहरूसहित यो खण्डमा जवाफ दिने आशा गर्दछौं । हामीले सहभागिताका तीन श्रेणीहरूमा यो खण्डलाई तल बाँडेका छौं: प्रार्थना, दानहरू, र वितरणद्वारा ।
सहभागी हुने पहिलो र एकदमै महत्वपूर्ण तरीका प्रार्थनाद्वारा हो । विविध भाषाहरू र देशहरूमा निःशुल्क पुस्तकहरू वितरण गर्नुको प्रक्रियामा, हामीलाई पहिलो तिमोथी अध्याय २ मा भेट्टाएको मानिसको मुक्तिको निम्ति विशेष प्रार्थना अनुरोधले प्रभाव पारिएका छन् ।
त्यसकारण म अनुरोध गर्दछु, सर्वप्रथम, अन्तर्विन्तीहरू, निवेदनहरू, धन्यवाद ज्ञापनहरू सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइऊन्; राजा र उच्च दर्जाहरूमा रहेका सबैका पक्षमा, कि हामीले सारा भक्ति र ईमान्दरितामा शान्ति र चैनको जीवन बिताउन सकौं । यो कुरा परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य छ, जसले सबै मानिसहरू मुक्त होऊन् र सत्यको पूर्ण ज्ञानमा आऊन् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ । १ तिमोथी २:१–४
यहाँ हामीले निम्न कुरालाई ध्यान दिन सक्छौं:
मानिसहरूको पक्षमा अन्तर्विन्तीहरू, मध्यस्तताहरू, र धन्यवाद ज्ञापनहरूलगायत, प्रार्थनाका बहुमुखी तहहरू ।
प्रार्थना सबै मानिसहरूतर्फ निर्देशित छ, र राजाहरू र शासकहरूलाई पनि समाविष्ट गर्दछ । हामीले आज संसारको स्थितिलाई विचार गर्दा, निश्चय नै अहिलेसम्म भएको भन्दा पनि बढी यो नै परमेश्वरको चाहना परिपूर्ण गरिने चाबी हो ।
परमेश्वरको चाहना दुईगुणा छः सबै मानिसहरू मुक्त हुनको निम्ति, र तिनीहरू सत्यको पूर्ण ज्ञानमा आउनको निम्ति । प्रार्थनामा हुने हाम्रो सहभागिताले यो चाहनालाई प्रतिबिम्बित पनि गर्नुपर्दछ ।
यो प्रार्थना ज्यादै खास र लक्ष्य निर्धारित छ, किनभने यसले शान्ति र चैनको जीवनको खाँचोलाई पनि उल्लेख गर्दछ । यस्तो स्थितिमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई मुक्त गर्ने र तिनीहरूलाई सत्यको पूर्ण ज्ञानमा ल्याउने मार्ग पाउनुहुन्छ ।
हाम्रा आफ्नै अनुभवले देखाएको छ कि परमेश्वरका जनहरूको समूह जब यस्तो प्रार्थनामा सहभागी हुनेछन्, केही वर्षहरूको अवधिभरिमा यी सबै खास बुँदाहरू भइहाल्नेछन् । हामी ईमान्दारसाथ आशा गर्दछौं कि धेरैहरूले यी पुस्तकहरूले स्वतन्त्र रूपमा सत्यको पूर्ण ज्ञान फैलाओस् भन्ने यस्तो तरीकामा प्रार्थना गर्नेछन् ।
दान दिनुभएर सहभागी हुनुहोस्
रेमा संयुक्त राज्य अमेरिका, वासिङ्टन स्टेटमा १९८२ मा स्थापित लाभरहित निगम हो । रेमाको लागि योगदानहरू यू. यस्. अनुसार भ्याट कटौतीपूर्ण हुन्छन् । आन्तरिक राजस्व नियमावली धारा ५०१ (ग) (३) । सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र समिति छ जसले रेमाका वित्तहरूको नियन्त्रण गर्दछ ।
सबै दानहरूको सराहना गरिन्छन् र बाइबल र ख्रीष्टियान साहित्य वितरण गर्न र सहायक क्रियाकलापहरूको भार बहन गर्न प्रयोग गरिन्छन्, जस्तो कि सम्मेलनहरू र सेमिनारहरू आयोजना गर्नु, जसले पाठकहरूलाई बाइबलमा अटाइएका सत्यहरू बुझ्न र अनुभव गर्न सहायता गर्दछ ।
तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी व्यापारिक उद्देश्यहरूको लागि खुल्ला गरिनेछैन वा अरू सङ्घसंस्थाहरूसित बाँड्नेछैन ।
देऊ, र तिमीलाई पनि दिइनेछ; पूरा–पूरा नाप, खाँदी–खाँदी, हल्लाई–हल्लाई, र पोखिने गरी, तिनीहरूले तिमीहरूको काखमा हालिदिनेछन् । किनकि जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ, त्यही नापले तिमीहरूका निम्ति फेरि नापिनेछ ।
रेमालाई दिनलाई प्रभुद्वारा बोझयुक्त पारिएकाहरूले निम्नलिखित तरीकाहरूमा दान दिन सक्छन्ः
रेमा साहित्य वितरकहरूलाई सहायता गर्नुहोस्—दान दिनुहोस्
स्वयम सेवक बन्नुभएर सहभागी हुनुहोस
त्यसकारण जाओ र तिनीहरूलाई पिताको र पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिदै, सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै पालन गर्न सिकाओ । अनि हेर, म युगको समापन नभइञ्जेलसम्म सारा दिनहरू तिमीहरूसँगै छु ।
तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछौ, र तिमीहरू दुवै यरूशलेममा र सारा यहूदिया र सामरियामा र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै मेरा साक्षीहरू हुनेछौ ।
पृथ्वीका विविध भागहरूमा निःशुल्क साहित्य वितरणमा सहभागी हुन चाहनेहरूले कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
रेमाले १०० देशहरूभन्दा बढी र २५ भन्दा बढी भाषाहरूमा उच्च गुणस्तर ख्रीष्टियान साहित्य वितरण गर्दछ । हामी सरल सिद्धान्तअनुसार वितरण गर्छौं—हाम्रा सम्पूर्ण साहित्य पूर्ण रूपमा निःशुल्कमा दिइन्छन् । हाम्रो निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक ऋृङ्खलामा भएको पहिलो पुस्तक ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्व हो ।
कपिराइट © 2011-2018 रेमा साहित्य वितरकहरूगोप्यता नीतिउपयोगका शर्तहरू